Ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho oo saaka bilaabay baaritaanno iyo hawlgallo amni kaddib markii xalay la weeraray saldhigyo ciidan. – Radio Daljir
Ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho oo saaka bilaabay baaritaanno iyo hawlgallo amni kaddib markii xalay la weeraray saldhigyo ciidan.
Muqdisho, Nov 09 ? Ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ayaa saaka bilaabay hawlgallo ammaanka lagu xoojinayo kuwaasi oo qaarkood lagu soo qabqabtay dhawr qof oo looga shakisan yahay ku lug-lahaansha falal nabadgalyo xumo oo saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay degmooyinka ka mid ah gobolka Banaadir.
Hawlgallada saaka oo ahaa kuwa aan baaxadweynayn ayaa laga sameeyey xaafado kooban oo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana uu yimid hawlgalku kaddib markii xalay saldhigyo bilayska oo ku yaalla degmooyinka Wadajir, Yaaqshiid iyo Hawl-wadaag lagu qaaday weeraro bambaanooyinka gacanta laga tuuro loo adeegsaday.
Weeraradaasi bambaano oo gaarayey illaa afar xabbo ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen dad rayid ah oo gaarya 5 ruux, kuwaasi oo ku sugnaa agagaarka saldhigyada la weeraray sida ay Radio Daljir u xaqiijiyeen saraakiil dawladda ka tirsani.
Tan iyo intii ururka Al-shabaab ay sheegeen in ay xeelad dagaal uga baxeen magaalada Muqdisho waxaa sii labo-lixaadsaday weerarada qarax ee ay fuliyaan Al-shabaab kuwaasi oo badankooda lala bar-tilmaameedsanayey xarumaha dawladda ee kala duwan.